Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 07
churchages.net » Shona » Zvidzidzo zveBhaibheri » Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 07
Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 07
Ruka Chaputa 7 ichaputa yezviratidzo apo Ruka anotaura nezvemakwara anoratidza kuti Mwari aironga kuenda kumaHedeni mukati menguva nomwe dzemakereke.
Asi Ruka aidawo kutanga aburitsa kuti maJuda achatanga aramba Jesu.
Ruka akanyora pamusoro pemurume wechiRoma aive nekutenda kukuru. Munhu uyu aive muHedeni. Aive nesimba semubati uye aitungamirira mauto kupfurikidza kutaura chete. Saka akati kuna Jesu aisafanira kuuya kumba kwake kuzoporesa muranda wake nekuti Jesu aive nesimba kwazvo, zvekuti aikwanisa kungotaura Shoko uye madhimoni aikonzeresa hurwere aizotiza. Izvi zvakaitika.
RUKA 7:9 Jesu akati achinzwa izvozvo akashamiswa naye, akatendevuka, akati kuvazhinji vakanga vachimutevera: Ndinoti kwamuri; handina kumbovona kutenda kwakadai, kunyangwe napakati pavaIsraeri.
Ruka anotaura pamusoro pekurumbidzwa kwakaitwa kutenda kwemuHedeni uyu naJesu kuti kwaive kwakakura kukunda kwemaJuda.
Izvi zvaive mufananidzo wenguva yaizouya apo kutenda muna Mwari kwaizopararira mukati memakereke emaHedeni.
Jesu akabva aenda kuguta reNaini kwaivigwa mwanakomana wechirikadzi. Jesu ndiye hupenyu husingagumi, saka rufu harungave pedyo naye zvachose sekuti rima harigari pane chiedza chakajeka. Saka munhu aive akafa akamuka.
MaJuda vaive vana vaMwari Baba saka vaivona maHedeni echipegani sevanhu vakafa pamweya sezvo Mwari aive asiri Baba vavo. Saka Jesu akaenda kumwanakomana wechirikadzi sezvo aive asisinawo baba vake panyama. Jesu akamumutsa kubva kuvakafa kuratidza kuti Jesu aizomutsa maHedeni echipegani akafa pamweya kuti vapindewo muhupenyu husingagumi mukati menguva nomwe dzemakereke.
Zvino Jahane Mubhabhatidzi wakatuma vadzidzi vake vaviri kuti vanobvunza Jesu kuti aive ndiye Mesiasi here. MaJuda aifungira kuti Meisiasi aizodzinga maRoma ese kubva muIsraeri, Mesiasi otonga Israeri. Jesu aive asingaiti izvi, saka haana kuita kunge mudzikinuri wemaJuda kubva kuvaRoma mumaziso mavo. Chinhu chikuru chatinotadza ndechekufunga kuti tinoziva kuti Mwari achaitei.
Asi Jesu aive nehurongwa hukuru. Aive asina zano rekununura maJuda kubva pahudzvanyiriri hwevaRoma. Aida kudzikinura rudzi rwevanhu kubva kuzvivi, saka nekudaro aida kushandura vaHedeni vairarama pasi rese mukati memakore 2 000 enhorondo yekereke.
Jesu akabva arumbidza Johane kuti aive muporofita mukuru.
RUKA 7:26 Asi makanga mabuda kundovoneiko? Muprofita here? hon’o ndinoti kwamuri; unopfuura zvikuru muprofita.
27 Uyu ndiye wakanyorwa pamusoro pake, zvichinzi: Tarira ndinotuma munyai wangu pamberi pako, Uchakugadzirira nzira yako pamberi pako.
Kupfurikidza kubhabhatidza Jesu Johane Mubhabhatidzi akaita izvi
a) akashambidza Jesu seGwaiana rechibairo nenzira imwe yaisukwa nayo zvipiriso nevaPrista
b) Akashambidza Jesu seMuprista Mukuru asati azodzwa neMweya Mutsvene wakaburuka kubva kudenga ukagara paari. Mosesi akashambidza Aroni akamuzodza nemafuta paakaitwa muprista mukuru.
Saka Johane Mubhabhatidzi akagadzira nzira yaJesu kuti ave Muponesi uye Muprista Mukuru weTarbenakeri yekudenga, inovakwa nemambwe anorarama evaKristu vakazvarwa patsva vanoita kereke yemaKristu mukati menguva nomwe dzemakereke.
RUKA 7:29 Zvino vanhu vose navateresi vakati vachizvinzwa, vakati Mwari wakarurama, zvavakanga vabhabhatidzwa norubapatidzo rwaJohane.
MaJuda nevatadzi (vateresi) vakagamuchira rubapatidzo rwaJohane Mubhabhatidzi rwekutendevuka.
RUKA 7:30 Asi vaFarise navadudziri vomurairo vakaramba kufunga kwaMwari pamusoro pavo, vakasabhabhatidzwa naye.
Vakuru vemaJuda vakaramba rubapatidzo rwaJohane.
Vanhu vakagamuchira Johane semuprofita asi vatungamiri vemaJuda vakaramba dzidziso dzaJohane. Saka dambudziko riri muvatungamiri vezvitendero vaive vasingadi chokwadi, asi vaida kuramba vari nesimba nekurudziro pamusoro pevanhu, nembiri uye mari zhinji.
Izvi zvakangofanana nezvakaitika pakupedzisira pehushumiri hwaJesu. MaJuda vakamurumbidza musi wesvondo achipinda muguta paaive akatasva mbongoro. Asi musi weChishanu wakatevera vatungamiri vemaJuda vaive vakurudzira vanhu vamwechete ivavo kuti vakumbire kuti aurayiwe.
Vakuru vechitendero ndivo vakakonzeresa kudonhera pasi kwemaJuda.
Pakutanga vakaramba rubapatidzo rwaJohane. Vabvapo vakanokumbirawo kuti Jesu auraiwe.
Arambwa nemaJuda, Jesu akabva atendeukira kumaHedeni.
RUKA 7:31 Naizvozvo vanhu verudzi urwi ndichavafananidza neiko? Vakafanana nei?
32 Vakafanana navana vagere padare, vanodanidzirana vachiti: Takuridzirai nyere, mukasatamba, takakukurirai mukasachema.
Ruka anotiudza kuti Jesu akafanotaura sei kuti maJuda vachamuramba.
Jesu akataura kuti vanhu pavanenge vachida kuramba chokwadi hazvina basa kuti chakaiswa kwavari nemhanzi inodakadza kana nenzira inosuwisa. Vanongoramba chokwadi zvakadaro.
RUKA 7:33 Nokuti Johane Mubhabhatidzi akavuya, asingadyi chingwa, asinganwi waini, zvino moti unomweya wakaipa.
34 Mwanakomana womunhu akavuya achidya achinwa zvino moti: Tarirai munhu unokara nomunwi, neshamwari yavateresi navatadzi.
Johane aive munhu wemurenje aive asingagari, kutaura, kana kufambidzana nevamwe vanhu maJuda vakamuramba. Jesu aive asiri munhu akaoma aishamwaridzana nevanhu, asi maJuda vakamuramba zvakare.
Ruka anotaura pamusoro pemaJuda achiramba vose Jesu naJohane sezvo izvi zvichizarura musuwo wekuti Jesu atendeutsire vadzidzi vake kuvaHedeni pavakatanga kereke yemuTestamente Itsva mukati menguva yekereke yekutanga.
RUKA 7:35 Asi vuchenjeri bwunoruramiswa navana vabwo vose.
MaHedeni aizotambira vuchenjeri hweEvhangeri hwakarambwa nevaJuda vakawanda. VaHedeni vakatambira zano raMwari reruponeso raive risina charaive rareva kumaJuda mazhinji.
Jesu akabva aenda kunodya mumba memuFarise uye mukadzi mutadzi akashambidza tsoka dzake akadzizodza. Zvakafanana nerubapatidzo rwaJesu, paakashambidzwa sechipiriso akagezwa uye kuzodzwa seMuprista Mukuru werudzi rwaMerkisedeki kuitira nguva nomwe dzemakereke.
Petro pazuva rePentecosti akataura zvinhu zvimwechete izvi.
MABASA 2:38 Petro akati kwavari; Tendevukai, mumwe nomumwe wenyu abapatidzwe muzita raJesu, kuti mukanganwirwe zvivi, mupiwe chipiwa choMweya Mutsvene.
Kushambidzwa mumvura dzerubapatidzo, kuzodzwa neMweya Mutsvene.
Ndiyo nzira yega yatinoponeswa nayo kubva kuHadesi.
RUKA 7:37 Zvino tarirai, muguta iro makanga munomukadzi waive mutadzi; iye wakati anzwa kuti ugere pakudya mumba momuFarise; akavuya nechinu chearbastera chaive nechizoro,
38 Akamira patsoka dzake mashure make, achingochema, akatanga kunyorovesa tsoka dzake nemisodzi, akadzipisika nebvudzi romusoro wake, ndokutseta tsoka dzake ndokudzizodza nechizoro.
Nei izvi zvakaitwa nemunhukadzi? Nei akashambidza nekuzodza tsoka dzake chete?
Mukadzi anomiririra kereke. Pauro anoda kereke semhandara yakazara kuti iwananiswe naJesu semurume wayo.
Saka Luka ari kumushandisa kuratidza kereke yenguva inouya yemaHedeni. Nebukadinezari akaona mufananidzo wemuHedeni. Musoro waive Babironi, mavoko vaive maMedi nemaPesia. Dumbu nezvidya vaive maGiriki. Makumbo aimiririra hushe hwemaRoma. Tsoka dzinomiririra makore 2 000 enhorondo yekereke anopera nekuuya kwaShe sedombo rinoputsa mufananidzo wacho wese.
Saka tsoka dzinomiririra nguva nomwe dzemakereke apo maHedeni anosukwa mumvura dzeShoko kereke ichishambidzwa neMweya Mutsvene.
VAEFESO 5:25 Imi varume, idai vakadzi venyu Kristu sezvaakadavo kereke, akazvipa nokuda kwayo.
26 Kuti aiite tsvene achiinatsa, nokushambidza kwemvura pashoko.
Misodzo inotaura pamusoro pekutendevuka apo maHedeni anotendevuka kubva kuzvivi zvavo. Bvudzi refu remunhukadzi rinomiririra kuzvideredza kwake kumurume wake. Kushandisa kwaakaita bvudzi rake refu kunoreva kuzozvideredza kwaizoita kereke kuMurume wayo, Jesu Kristu, anova Shoko.
Vakadzi vechiKristu mazuvano vanogera bvudzi ravo zvekuti havazokwanisi kuita zvakayemurwa mukadzi uyu aita naKristu. Uye aive mutadzi! Hwaro hwedu hwakaderera here? Mukadzi wanhasi ane bvudzi pfupi mucherechedzo wekereke isingazviwisiri kuBhaibheri here?
RUKA 7:39 Zvino muFarise wakanga amudana wakati achizvivona, akareva mumoyo make, achiti: Munhu uyu dai aiva muprofita, ungadai aiziva mukadzi uyu unomubata kuti ndiyani, vuye kuti wakadini, nokuti mutadzi.
MaJuda aive achizviti akarurama asina nguva nevatadzi, kunyanya vatadzi vechiHedeni.
RUKA 7:40 Ipapo Jesu akapindura, akati kwaari: Simoni ndine shoko newe, Akati: Revai henyu mudzidzisi.
41 Jesu akati: vanhu vaviri vakanga vanechikwereti chamadenari anemazana mashanu,* mumwe chamakumi mashanu,
42 Vachiti vashaiwa chokuripa nacho, akangovakanganwira vose vari vaviri. Zvino ndoupiko kwavari uchanyanya kumuda?
43 Simoni akapindura akati: handiti ndiye wakakanganwirwa zvizhinji here. Akati kwaari; Wareva kwazvo.
MaJuda vaive pedyo naMwari kukunda maHedeni echipegani. Saka maJuda vaive vakatendeka kukunda vaHedeni. Saka Mwari ane zvishoma zvekukanganwira maJuda, nekuti vaive nezvakawanda zvavaiita zvakanaka.
Asi maHedeni vaive kure kwazvo naMwari vachiita zvakaipa zvakawandisa kukunda maJuda. Saka Mwari aive nezvizhinji zvekukanganwira maHedeni kwazviri.
Saka mukati menguva dzemakereke MaHedeni vaizova nerudo rwakanyanya naMwari kukunda maJuda. Saka kereke yemaHedeni inozova mudzimai waKristu nekuti, kuva vakaregererwa kubva kuzvitendero zvavo zvese zvechipegani, maHedeni aizoda Mwari zvakanyanya.
RUKA 7:44 Zvino akatendevukira kumukadzi, akati kuna Simoni: Unovona mukadzi uyu here? Ndakapinda mumba mako, ukasandipa mvura yetsoka dzangu; asi uyu wakanyorovesa tsoka dzangu nemisodzi yake, akadzipisika nebvudzi rake.
MaJuda anochengeta murairo haana kubata Jesu nenzira yakanaka. Mukadzi akazara zvivi (kereke) akamubata zvakanaka. Saka iri igwara rakajeka rinotiratidza kuti Jesu aizotendevukira kuvatadzi (vaHedeni) kuti aite Kereke yeTestamente Itsva.
Kana murume achitsvaga mukadzi, anotsvaga munhu anozomuda zvakanyanyisa.
RUKA 7:45 Hauna kundiseta , asi uyu chinguri chandapinda haana kurega kusveta tsoka dzangu.
Mukadzi mutadzi (maHedeni aive akazara zvivi aizoita kereke) aive akazvipira kuna Jesu. Aive akanganwirwa zvizhinji iye akamudawo zvakadzama.
Kuva patsoka dzaJesu zvinoratidza kuzvininipisa uye kuteerera Jesu. Ndizvo zviratidzo zvekereke yemaHedeni yeTestamente Itsva.
RUKA 7:46 Hauna kundizoza musoro wangu namafuta, asi uyuwakazodza tsoka dzangu nechizodzo.
MaJuda aive akatendeka zvakanyanya kukunda mukadzi mutadzi vaive vasina shungu naJesu.
Jesu akauya achizvininipisa uye nenzira yakareruka. MaJuda haana kufadzwa nazvo. Vaida mambo anouya muhupfumi hwepasi rino aizodzinga hutongi hweRoma. Zano raMwari rekufa paCalvari kuti aponese rudzi rwevanhu raive risiri zano ravakafarira.
MaJuda havana kana kuona musoro waJesu. Mukadzi mutadzi akazvininipisa patsoka dzake.
RUKA 7:47 Naizvozvo ndinoti kwauri; Zvivi zvake, zviya zvizhinji, wazvikanganwirwa, nokuti wakada zvikuru; asi unokanganwirwa zvishoma, unoda zvishoma.
MaJuda airarama hupenyu huri nani hwakati chenei, uye vaive nezvivi zvishoma zvaida kanganwiro. Saka havana kuda Mwari zvakanyanya. Vakasarudza hushe hwenguva duku hwezvematongerwo enyika hweIsraeri pachinzvimbo chehushe hwenguva refu hwaMwari, hunova rubapatidzo rweMweya Mutsvene.
RUKA 17:21 Havangati: Tarirai pano! Kana: Uko! Nokuti tarirai, vushe bwaMwari bwuri mukati menyu.
Mweya Mutsvene waMwari mukati medu unoita mumwe nemumwe wedu kuti ave dombo rinorarama muhushe hwake hwemweya.
RUKA 7:48 Zvino akati kwaari: wakanganwirwa zvivi zvako.
Mukadzi aimiririra kereke. Kereke yevaHedeni, yakabatira panaJesu Kristu, Shoko, uye mumisodzo yekutendevuka, inoregererwa kuzvivi zvayo.
RUKA 7:49 Vakanga vagere naye pakudya vakatanga kureva momoyo yavo, vachiti: Uyundiyaniko unokanganwira zvivi vo?
MaJuda haana kutambira kuti Jesu aikwanisa kuregerera zvivi. Asi Jesu akabva atendevukira kuvaHedeni akavapa ruponeso rwake mukati menguva yekereke yekutanga, ava vaida kutambira.
RUKA 7:50 Akati kumukadzi: Kutenda kwako kwakuraramisa; enda zvako norugare.
Jesu akaona mukadzi uyu sechiratidzo chekereke yemaHedeni yenguva yaiuya. Tinoponeswa nenyasha kupfurikidza kutenda.
rubapatidzo rweMweya Mutsvenendiro zororo redu remukati kubva kuzvivi. Ipapo pega ndipo patinowana rugare nekudakara muna Mwari.
JOHANE 14:26 Asi munyaradzi, Mweya mutsvene, uchatumwa naBaba muzita rangu, iye uchakudzidzisai zvose, zvandakareva kwamuri.
27 Ndinokusiirai rugare; ndinokupai rugare rwangu; handikupiyi sokupa kwenyika, moyo yenyu irege kumanikidzwa, irege kutya.